Ohatrinona no fantatrao momba ny famonosana tombo-kase?-CIXI DONGFENG SEALING&PACKING Co., Ltd
Ohatrinona no fantatrao momba ny famonosana tombo-kase?
Fotoana: 2021-12-08 Hits: 7
Ahoana ny fisafidianana ny fomba famehezana rehefa mamolavola ny milina? Ity lahatsoratra ity dia mitondra anao hahatakatra ny endrika tombo-kase mavitrika mahazatra amin'ny famolavolana mekanika. Izy ireo dia famonosana tombo-kase, tombo-kase mekanika, tombo-kase entona maina, tombo-kase labyrinth,
tombo-kase menaka, tombo-kase mavitrika ary tombo-kase miolakolaka. Andeha hojerentsika aloha ny tombo-kase famonosana anio!
Ny tombo-kase fonosana dia azo zaraina ho tombo-kase malefaka, tombo-kase mafy, ary tombo-kase fonosana voavolavola araka ny toetrany ara-drafitra.
1) Tombo-kase malefaka
Karazana fonosana malefaka: fonosana
Ny fonosana dia matetika voatenona avy amin'ny kofehy malefaka kokoa, izay fenoina ao amin'ny lavaka voaisy tombo-kase amin'ny alàlan'ny tady miaraka amin'ny faritra midadasika. Ny hery fanerena dia ateraky ny fihary mba hanery ny entana ary hanery ny entana ho
tsindriana amin`ny famehezana ambonin`ny (shaft). Eo amin'ny ety ivelany sy ny lavaka voaisy tombo-kase), ny hery radial ho an'ny vokatry ny famehezana dia miteraka, ka mitana anjara toerana famehezana.
Hetsika azo ampiharina amin'ny famonosana malefaka:
Ny fitaovana famonosana nofantenana ho an'ny famonosana dia mamaritra ny vokatry ny famehezana ny famehezana. Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana famonosana dia voafetra amin'ny mari-pana, ny tsindry ary ny pH an'ny fitaovana miasa, ary ny hamafin'ny tany sy
Ny eccentricity amin'ny fitaovana mekanika izay miasa ny famonosana sy ny hafainganam-pandehan'ny tsipika, sns., dia hanana fepetra ihany koa amin'ny fisafidianana ny fitaovana famonosana.
Ny fonosana grafit dia afaka mahatohitra ny mari-pana ambony sy ny fanerena avo lenta, ary iray amin'ireo vokatra mahomby indrindra hamahana ny olan'ny mari-pana ambony sy ny famehezana fanerena ambony. Ny fanoherana ny harafesina, ny famehezana tsara dia tsara
-ance, stable ary azo itokisana.
Ny fonosana aramid dia karazana fibre organika matanjaka. Ny fonosana tenona dia asiana emulsion polytetrafluoroethylene sy lubricant.
Ny fonosana polytetrafluoroethylene dia vita amin'ny resin dispersion polytetrafluoroethylene madio ho akora, natao voalohany ho sarimihetsika manta, ary avy eo ahodina, randrana ary tenona ho ao anaty fonosana. Azo ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, fanafody,
fanamboarana taratasy, fibre simika, sns. Ny fitakiana ny fahadiovana, ary ny valva sy ny paompy miaraka amin'ny haino aman-jery mahery vaika.
2. mafy fonosana tombo-kase
Misy karazany roa ny tombo-kase fametahana mafy: peratra misaraka sy peratra misaraka.
Taloha: Fitaovana mahazatra sy ny sahan'ny fampiharana ny O-peratra
Next: Inona avy ireo fomba leakage ny peratra famehezana? Nahoana no misy leak?